Taorian’ny Nilazany Ilay Mahery Fo Armeniana Ho “Mpiara-Miasa Amin’ny Fasista”, Nihemotra Ilay Fahitalavitra Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny Nilazany Ilay Mahery Fo Armeniana Ho “Mpiara-Miasa Amin'ny Fasista”, Nihemotra Ilay Fahitalavitra Rosiana
Voadika ny 10 Desambra 2017 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Português, Italiano, English
“Nzhdeh” avy amin'i Avo. Sary tamin'ny sehatra ho an'ny daholobe .
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org nosoratan'i Joshua Kucera ity manaraka ity. Navoaka indray rehefa nahazoana alàlana.
Niala tsiny ny foibe fahitalavi-panjakana Rosiana iray taorian'ny nandefasany ampaham-pandaharana iray momba ny fiarahamiasan'ilay Armeniana mpiady mafana fo tamin'ny Nazi Alemàna.
Tamin'ny 19 Novambra, nalefan'ny TV Zvezda, foibenà fahitalavitra mifandray amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Rosiana, ny toetra mampiavaka an'i Garegin Nzhdeh, armeniana tia tanindrazana mahabe adihevitra. Tsy nanaiky ny fifehezan'ny Bolshevika an'i Armenia i Nzhdeh, taorian'ny revolisiona rosiana ka dia nifanaraka tamin'ny tafika Nazi hanohitra ny Firaisana Sovietika tamin'ny Ady Lehibe Faharoa.
Ilay mpanolotra fandaharana, Veronika Krasheninnikova — tomponadraikitra ao amin'ny antoko Rosia Mitambatra, antoko eo amin'ny fitondrana — dia nanamarika fa nisy sarivongan'i Nzhdeh najoro tany Yerevan tamin'ny 2016, ary nampifandraisiny amin'ny firoborobon'ny fifamatoran'i Armenia amin'ny Vondrona Eoropeana ny fanomezan-danja azy.
“Tsy ny firaisana amin'ny Vondrona Eoropeana no zavatra tokana ataon'i Armenia toa an'i Okraina — sarotra inoana izany, fa Yerevan kosa dia manome lanja ny fiarahamiasa amin'ny fasista,” hoy izy.
Nantsoin'i Krasheninnikova hoe “Bandera-n'i Aremnia” i Nzhdeh, nampitoviany tamin'ilay Okrainiana tia tanindrazana, Stepan Bandera, izay niaraka niasa tamin'ny Nazi koa ary lasa maherifo ho an'ny Okrainiana maro amin'izao fotoana izao. Ary nampitahainy tamin'ny sary famantarana ny Reich (fanjakana ) fahatelon'i Nazi ny an'ny Antoko Repoblikana Armeniana (RPA).
Io no farany indrindra amin'ny andiana fifandirana mana-tantara misy eo amin'i Armenia sy Rosia, izay nahakasika ny fanadiovana Stalinista tamin'ny 1937 sy ny ezaka fanesorana ny anaran'ireo mahery fo Bolshevika eny amin'ny làlamben'i Yerevan.
Fa mipoapoaka manokana ny fampitahana an'i Armenia amin'i Okraina tonga avy any Rosia, izay tsy mitandro hasasarana fa mitrandraka ny fanandratan'i Okraina ireo maherifo ho lasa tia tanindrazana amin'izao vaninandro izao, ary indraindray fasista, ho toy ny fanamarinana ireo fanafihany an'i Okraina amin'ny lafiny maro.
Fa tsy Okraina — iray amin'ireo mpiaradia akaiky amin'i Maosko, sady mampiantrano ny toby miaramila rosiana — i Armenia
Namaly haingana ireo Armeniana manampahefana.
“Garegin Nzhdeh dia iray amin'ireo maherifo ngezalahy indrindran'ny firenena Armeniana ary tsy tokony ho any Yerevana ihany no atsangana ny tsangambato ho fahatsiarovana azy fa manerana ny faritra maro aty Armenia,” hoy ny tenin'i Eduard Sharmazanov, mpitondra tenin'ny RPA tamin'ny RFE/RL. ” Firenena manana ny fiandrianany i Armenia ary hanapaka hevitra samirery momba ny ho tsangambaton'iza no hajoro.”
Nampian'i Sharmazanov fa ny fampitahana ny fangon'ny antokony amin'ny sary famantarana ny Nazi dia ” tsy misy dikany sady fahajambàna ara-politika.”
Nihemotra haingana ny TV Zvezda, ary niala tsiny sy nanala ilay ampaham-pandaharana tao amin'ny tranonkalany.
“Diso ny filazàna sy ny tombatombana nataon'ny mpanolotra fandaharana Veronika Krasheninnikova momba an'i Armenia tao amin'ilay ampaham-pandaharana natokana ho an'ny fifandraisana eo amin'i Armenia sy ny vondrona Eoropeana,” hoy ny taratasy nalefan'ny filoha Zvezda ho any amin'ny masoivohon'i Armenia any Mosko. ” Manolotra ny fialàntsininay izahay noho io hadisoana io.”
Niteny tamin'ny mpitantanailay ny foibena fahitalavitra ny mpitondratenin'ny masoivoho, Levon Torgomyan, fa ” nisy ny fahadisoana sy tsy fifankahazoana kely ” ary naneho ny fanantenany ho “amin'ny fitohizan'ny fifandraisan'ny mpifanolo-bodirindrina.”
Toa hoe mpankasitraka an'i Azerbaijana, fahavalon'i Armenia, i Krasheninnikova taloha. Tamin'ny herintaona dia nitafatafa tao amin'ny tranonkala Vestnik Kavkaza izy, izay nankalazany ny fahombiazan'ny Azerbaijana tamin'ny andron'ny Filoha Ilham Aliyev. “Ho firenena mandroso Azerbaijàna miaraka amin'ny fiarahamiasa akaiky ara-tafika sy ara-politika ary ara-toekarena amin'i Rosia,” hoy ny faminaniany tamin'izany.
Nanaraka ilay adihevitra momba an'i Nzhdeh tamin-kafaliana i Azerbaijàna ; nandrakotra akaiky ny tantara momba ny tatitry ny TV Zvezda ny haino aman-jery Azerbaijane ary lava ny tenin'ny mpitondra tenin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny, Hikmet Hajiyvet, momba izany. ” Lasa politikam-panjakana ao amin'io firenena io [Armenia] ny fampielezankevitra Nazi,” hoy izy tamin'ny tafatafa iray nifanaovana tamin'ny News.az. “Ny ideolojia nasionalin'i Armenia izay mifototra amin'ny fitiavan-tanindrazana manavakavaka noforoninn'i Nzhdeh Garegin no fironana ideolojikan'ny Antoko Repoblikana Armeniana eo amin'ny fitondràna amin'izao fotoana izao ary, avy eo, an'ny governemanta armeniana.”
Ankoatra ny fitokana-monina ara-jeôpolitika, dia tena noheverina fa endrika ngezalahy mampisalasala iankohofana i Nzhdeh. Napetraky ny mpahay tantara ao anatinà toe-javatra mitovy amin'i Okraina sy ireo fanjakana Sovietika taloha ny lovany sy ny fanarenana azy vao haingana.
“Manoratra indray ny tantarany ireo firenena sovietika rehetra amin'izao fotoana izao. Lasa fahavalo ireo mahery fo ankehitriny ; ny fahavalo fahiny, na ny fasista aza, dia mahery fo ankehitriny,” hoy ilay Armeniana-amerikana mpahay tantara, Ronald Grigor Suny, tao amin'ny tafatafa iray vao haingana. “Mitranga izany any amin'ireo firenena baltika sy any Armenia. Ireo olona sasantsasany izay niaraka niasa tamin'ny Nazi, toa an-dry Garegin Nzdeh, no heverina ho mahery fo amin'izao fotoana izao.”
Tsy neken'i Efraim Zuroff, talen'ny biraon'ny Simon Wiesenthal Center any Jerosalema ilay fananganana ny sarivongan'i Nzhdeh tany Yerevan tamin'ny taona lasa.
“ Tena mahatezitra ny nanangan-dry zareo ilay sarivongana,” hoy Zuroff tao amin'ny Jerusalem Post taorian'ny nametrahana ilay sarivongana. ” Tsy maintsy toherintsika izay rehetra fanandratana olona niaraka niady tamin'ny Nazi na izay rehetra hery nanampy ny Reich fahatelo.”
Nampifandraisin'i Zuroff tamin'ny ” tranga mampisalasala any Eoropa Atsinanana tamin'ny fotoana izay nanoratana indray ny tantara mba hanenàna ny fiarahamiasan'ny ao an-toerana amin'ny Nazi” ilay sarivongan'ny Nzhdeh , hoy ny tatitry ny Post.
“Noho izany dia hadisoana mampalahelo sy fanaovana tsinontsinona ireo nampahorian'ny Nazi sy ireo rehetra niady tamin'i Nazi,” hoy i Zuroff.
12 ora izayAzerbaijan